कोरोनाको निःशुल्क उपचार दायित्वबाट भाग्नु सरकारको गैरजिम्मेवार: डा. भट्टराई – MB Khabar
कोरोनाको निःशुल्क उपचार दायित्वबाट भाग्नु सरकारको गैरजिम्मेवार: डा. भट्टराई
MB Khabar ५ कार्तिक २०७७, बुधबार
५ कात्तिक, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले कोरोना पीडितको निःशुल्क उपचारको दायित्वबाट भाग्नु सरकारको गैरजिम्मेवार चरित्रको पराकाष्ठा भएको बताएका छन् । यसले महामारी झन् विकराल बन्ने उनको धारणा छ ।
बुधबार बिहान ट्वीट गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले पैसा अभाव भएको भए दानपात्र राख्न तर सबै संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्न सकिने बताएका छन् । जनताको ज्यान जोगाउन अरु सबै खर्च रोके हुने उनको धारणा छ ।भट्टराईले लेखेका छन्, ‘कोरोना पीडितलाई निःशुल्क उपचारको दायित्वबाट भाग्नु सरकारको गैरजिम्मेवार चरित्रको पराकाष्ठा हो । यसले महामारी झन् विकराल बन्नेछ । यो पैसाको अभावले हैन, जनताको ज्यान जोगाउन अरू सबै खर्च रोके हुन्छ, भ्रष्टाचार/फजुल खर्च रोके पुग्छ । अस्पतालमा धनीले दिन चाहे दानपात्र राखौं तर सबैलाई निःशुल्क गरौं ।’
सरकारले हालै मात्र आर्थिकरुपमा विपन्न, अशक्त, असहाय, एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, जेष्ठ नागरिक र अग्रपंक्तिमा खटिनेहरुमा लक्षण देखिए मात्रै परीक्षण र उपचार गर्ने र यदि कोरोना बिमा गरेको भए त्यसबाट कट्टा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रचण्ड-माधव समूहले दोस्रो चरणको आन्दोलन
विद्रोह निश्चित छ, पार्टीभित्र अहंकार उस्तै छ : रामकुमारी झाँक्री
‘रअ’का प्रमुख संगको भेटको सबैलाई भन्न मिल्दैन : प्र.म. ओली
ओलीलाई हटाउनैपर्छ : बाबुराम भट्टराई
सामाजिक दूरी कायम गरी कृषि उत्पादनलाई अघि बढाऔं: पम्फा भुसाल